Home » Vaovao momba ny dia lavitra » 46% n'ny mpivezivezy atsinanana atsinanana mikasa ny hiala sasatra any ivelany amin'ny 2021
Ny fanadihadiana ny angona indostrialy farany indrindra dia nanambara fa 46% amin'ireo mpandeha lafo vidy any Moyen Orient, dia mikasa ny handeha iraisam-pirenena amin'ny dingana sasany mandritra ny 2021.
Ny fanadihadiana dia nanontany an'ireo mpandray ihany koa raha mikasa ny hanao fialantsasatra an-trano na fialofana izy ireo mandritra ny 2021 ary mihoatra ny antsasaky (52%) ireo namaly no nanamafy fa hanaiky izany. Ankoatr'izay, ny 25% amin'ireo mpamaly dia mikasa ny hanao dia lavitra, na eto an-toerana na any ivelany ary ny 4% -n'ireo mpamaly dia tsy mikasa ny handeha na aiza na aiza amin'ny 2021.
Nanontaniana momba ireo fahita matetika amin'ny dia ihany koa ireo mpitsangatsangana any Moyen Orient - 31% amin'ireo namaly no nilaza fa mikasa ny hanao indroa mandritra ny 12 volana ho avy ary 25% no nanamafy fa mikasa hanao dia lavitra iray any ivelany izy ireo.
Ireo mpandeha lavitra any Moyen Orient dia toa mandeha lavitra miaraka amin'ireo zanany, raha oharina amin'ireo avy any amin'ny faritra hafa (40% sy 36%). Ary rehefa ampianao an'io ny zava-misy amin'ny volavolan-dalany kasaina hatao, dia mahatonga ny sehatry ny fitsangatsanganana an-tampon'ny Moyen Orient, iray amin'ireo be mpitady indrindra eran'izao tontolo izao.
Raha ny fanadihadiana natao dia ireo mpitsangatsangana any Moyen Orient dia mazoto amin'ny toeran-kaleha manana hatsaran-tarehy voajanahary miavaka (34%), fialantsasatra amoron-dranomasina (34%), toetr'andro (29%) ary fifandraisana (28%). Nahita ihany koa ny fanadihadiana fa ireo mpandehandeha lafo vidy any Moyen Orient dia miahiahy indrindra momba ny risika ara-pahasalamana amin'ny dia (43%) sy ny fiarovana (35%). Na izany aza, ny iray tamin'ireo namaly dia nilaza ihany koa fa ny tena vidiny ary izany dia maneho ny sandan'ny vola dia mbola tena zava-dehibe.
Miaraka amin'ny vaksinina voahodina manerana an'izao tontolo izao, ireo matihanina amin'ny dia miasa eo amin'ny sehatry ny haitraitra dia handray ny fomba fijery nomen'ity fanadihadiana ity, izay ahafahan'izy ireo mampivelatra ny paikadim-barotra ho an'ny faritra Afovoany Atsinanana sy ny sisa.